के तपाईंले जापानी ब्वासो देख्नु भएको छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > के तपाईंले जापानी ब्वासो देख्नु भएको छ ?
यदी हजुर कतै जंगल तिर हाईकिङ जादै हुनुहुन्छ भने पनि जापानी ब्वासो देख्नु हुने छैन। किन होला सोच्नु भएको छ ? किनकि जापानी ब्वासोहरु धेरै पहिले नै लोप भैसकेका छन्। जापानको अन्तिम ब्वासोको मृत्यु सन् १९०५ मा भएको हो। के भएर चाहि जापनमा यी ब्वासोहरु १०० वर्ष अगाढीनै लोप भएका हुन् त ? आउनुहोस आज हामी हजुरहरुलाई यहि कुरा को जानकारी गराउनेछु।
जापानी ब्वासोका दुई प्रकार
जापानमा दुई प्रकारका ब्वासोहरु थिए। एक हो जापानी ब्वासो जसलाई होन्शु वुल्फ़ पनि भनिन्थ्यो। अर्कोको नाम चाहि होकाइदो ब्वासो जसलाई एजो वुल्फ पनि भनिन्थ्यो। होन्शु वुल्फ जापानमा मात्रै पाईन्थ्यो। एजो वुल्फ भने जापानको होकाईदो र रसियाको साखालिनमा पनि पाईने गरिन्थ्यो।
जापानी (एजो) वुल्फ अलि सानो प्रजाति को ब्वासो हो। यो ५८ सेन्टिमिटर मात्र अग्लो हुने गर्दथ्यो। होकाईदो वुल्फ भने ८० सेन्टिमिटर सम्म अग्लो हुने गर्दथ्यो। होकाईदो वुल्फ अमेरिका र अन्य एसियामा पाइने ग्रे वुल्फ जत्रै ठुलो हुने गर्दथ्यो।
जापानी वुल्फको पतन
जापानी वुल्फहरु सदियौसम्म शान्त संग रहन्थे। उनीहरुलाई कसिको खतरा थिएन। कृषकहरु पनि यी ब्वासोहरुले गर्दा बालि खाने अरु पशुहरु प्रति सचेत गराउने भनेर ब्वासाहरु प्रति कृतज्ञ थिए। ब्वासोहरु मानिसहरु संग नजिकै रहदै आएको जापानी कथाहरु अझै सुन्न सकिन्छ। तर १८ औ शताब्दी तिर एउटा नराम्रो घटना घट्यो। सन् १७०० तिर चीनबाट रेबिज भन्ने बिमारी जापान सम्म आईपुग्यो। जब ब्वासोहरु पनि रेबिजबाट संक्रमित हुने थाह भयो मानिसहरु ब्वासो संग दराउन थाले। हुन पनि त्यति बेला रेबिज लाग्नु भनेको मृत्यु बराबर थियो। मेइजि युगको सुरुवात संगै जापानमा ब्वासो मर्ने रास्ट्रीय अभियाननै चलाइयो। यहि कारणले गर्दा जापानबाट यी दुइ प्रजाति (एजो वुल्फ र होन्शु वुल्फ) बिलिन भए।
लोप भैसके पछि पनि थुप्रै मानिसहरुले यी जापनी वुल्फ देखेको घटना सुनाउन थाले। तर यी मानिसहरुको घटनालाई हिमालमा एति देखेको, तास्मानियाँ बाघ देखेको जस्तै कथाको रुपमा लिन थालियो। जनावर बिशेसज्ञहरुले मानिसले एक प्रजातिको फेरल कुकुर देखेको हुन सक्ने र ब्वासो जस्तै देखिने हुनाले छुटाउन नसकेको बताउछन। होकाईदो वुल्फ पनि मानिसहरुले अहिले पनि रसियाको शाकलिन तिर देखिने बताउछन। तर थुप्रै खोजि गर्दा पनि यी ब्वासो छन् भन्ने सबुत पत्ता लगाउन सकिएको छैन।
अहिले कहाँ देख्न पाईन्छ
एजु र होन्शु ब्वासोको लोप जापानी ईतिहासको नराम्रो र दुखद कहानी हो। यो ईतिहासले जंगली जनावर र मानब बीचको टकराबले कस्तो मोड्लिने भन्ने देखाउछ। जापानीहरुले ज गरे त्यसले यी पशुहरु कहिले फर्केर नआउने गरि लोप भए। नारामा रहेको हिगाशियोशिनो भन्ने गाँउमा यो ब्वासो को एउटा मूर्ति बनैइएको छ। त्यो मुर्ति मुनि टोशिओ मिहाशिको एउटा हाईकु लेखिएको छ। हैकु यस्तो छ , म हिड्थे, त्यो ब्वासो संग, जुन अहिले छैन।
यदि हजुरलाई यी ब्वासोहरु कस्तो देखिन्थे भन्ने हेर्न मन छ भने यिनीहरुको स्पेसिमेन हेर्न सकिन्छ। ट्याक्सीडर्मि गरिएका ब्वासाहरु होकाईइदो म्युजिअम र होकाईदो युनिभर्सिटि म्युजिअममा अझै राखिएको छ। टोकियोको उएन पार्कमा पनि जापानी वुल्फको हाडले बनेको संरचना समरक्षन गरेर राखिएको छ।